Musiibooyinkii dabiiciga ee ugu xumaa taariikhda | Saadaasha Shabakadda
Sawirka Hurricane Katrina, oo la duubay 2005
Mararka qaar dabeecadda waxay ina tustaa awooddeeda oo dhan, xooggeeda oo dhan. Waa wax qayb ka ah meerahan, sidaa darteedna, Ma lihin xulasho aan ka ahayn inaan baranno sidaan ula noolaan lahayn.
Si kastaba ha noqotee, qarniyo badan waxaa jiray ifafaalooyin aan naga yaabin oo keliya, laakiin sidoo kale khatar gelinaya malaayiin dad ah. Maanta waxaan xasuusan doonnaa aafooyinka dabiiciga ah ee ugu daran taariikhda.
Dhulgariir iyo Tsunami ka dhacday Lisbon (Boortaqiiska)
Waxaan u maleyneynaa inaan ka fikirno, sabab la'aan, in Jasiiradda Iberia aysan jirin wax khatar ah oo dhulgariir ama dhacdooyin saadaasha hawada oo daran. Laakiin Nofeembar 1, 1755 waxaa dhacay dhulgariir isna sababay mowjado hirar ah, oo sababay dhimashada ku dhowaad 100 kun oo qof.
Duufaanta Gilberto ee dalka Mexico
Duufaannada, oo laga arko dayax gacmeedyada ama shucaaca, xitaa way qurux badan yihiin, laakiin runtu waxay tahay in la ixtiraamo oo tallaabooyin taxane ah la qaado si looga fogaado khatarta. Laakiin xitaa marka taxaddar, nasiib-darrooyinku dhacaan, sidii Sebtember 1988. Waxay sababtay wadar ahaan 318 dhimasho.
Dhulgariir iyo Sunaamis ka dhacday Valdivia (Chile)
Bishii Meey 22keedii, 1960kii magaalada Valdivia ee dalka Chile waxaa laga diiwaan galiyay dhulgariir xoog leh oo gaaraya 9 darajo Richter, kaasoo sababay tsunamis dhowr ah Ku saabsan 2 kun oo qof Waxay ku naf waayeen.
Haiti kadib Tsunami sanadkii 2010
Duufaanta Katrina ee USA
Waa mid kamid ah duufaannadii ugu waxyeellada badnaa taariikhda dhow. Waxay ka timid Koonfurta Florida illaa Texas, taasoo ka tagtay khasaarooyin maaddooyin aan tiro lahayn. Nolosha ka qaatay 2 kun oo qof, taasoo sababtay tirada ugu badan ee dhimashada New Orleans.
Qarxinta Krakatoa, iyo tsunamis dambe oo ka dhacday Indonesia
Qaraxyada Fulkaanaha waxay abuuraan aragti aan caadi ahayn, laakiin sidoo kale way ka tagi karaan dhibbanayaasha, sidii ka dhacday Agoosto 26, 1883 waddanka Indonesia Krakatoa waxay ku qaraxday qaab qarxa oo laga maqlay meel ka fog 3 oo kilomitir. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, ka dib markii uu dillaacay mowjado isdaba joog ah ayaa la sameeyay oo gaadhay dherer ku dhow 40 mitir. Waxay ku naf waayeen in ka badan 36 kun oo qof.
Sida aan aragno, masiibooyinka dabiiciga ah ee sababa burburka waa kuwo waqtigooda ilaaliya, laakiin waa inaad feejignaataa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda